कसरी अधिक मिलनसार र तपाईं जस्तै मान्छे बन्न ▷ ➡️ अनलाइन पत्ता लगाउनुहोस् ▷ ➡️
कसरी अधिक मिलनसार र मान्छे मनपराउने। धेरै मानिसहरूले सोचेको विपरीत, कोही पनि सधैं राम्रो वा खराब हुन सक्दैन। केही व्यक्तिहरू धेरै लजालु, अन्तर्मुखी र असुरक्षित हुन सक्छन्, तर तिनीहरूसँग सधैं हुन्छ राम्रो र सकारात्मक प्रतिक्रिया केहि व्यक्ति वा परिस्थितिहरूमा। यो पनि हुन्छ कि बाहिर जाने र जीवन्त मानिसहरू समय समयमा फिर्ता लिन सकिन्छ। मन नपराउने वा सहानुभूति मानव अन्तरक्रियाको प्रतिक्रिया हो र धेरै कारक र चर समावेश गर्दछ।
निम्न लेखमा हामी तपाईंलाई दिनेछौं अधिक मिलनसार र मानिसहरू द्वारा मन पराउने कुञ्जीहरू। के तपाइँ यसलाई याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
1 सहानुभूति वा मन नपर्ने के उत्पन्न हुन्छ?
2 कसरी अधिक मिलनसार र तपाईं जस्तै मानिसहरू चरणबद्ध हुन
2.1 आफैलाई थाहा छ
2.2 आफैलाई माया गर
2.3 आफैमा बिश्वास राख्नुहोस्
2.4 भिन्नताहरूको सम्मान गर्नुहोस्
2.5 गल्ती गर्न नडराऊ
2.6 आफै हुनुहोस्
2.7 आफ्नो जवाफ खोज्नुहोस्
सहानुभूति वा मन नपर्ने के उत्पन्न हुन्छ?
विभिन्न कारकहरूले नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न सक्छन्, जस्तै व्यक्तित्व, उपस्थिति, मुड, योग्यता, र भावनात्मक पृष्ठभूमि। त्यहाँ पनि धेरै छन् सकारात्मक भावनाहरू ट्रिगर गर्ने कारकहरू, जस्तै व्यक्तित्व संग पहिचान, साझा स्वाद र सपना, प्रशंसा, दया र समान कारणको लागि संघ।
जब तपाइँ कसैसँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, तपाइँ उनीहरूको सबै भावनात्मक सामग्री सक्रिय गर्नुहुन्छ, जसले पीडा वा प्रेम, आनन्द वा उदासी, डर वा क्रोधको सम्झनाहरू ट्रिगर गर्न सक्छ। यदि तपाईंसँग धेरै नियन्त्रण गर्ने आमा हुनुहुन्थ्यो भने, उदाहरणका लागि, तपाईं सही हुनुहुन्छ जस्तो व्यवहार गर्ने र कसैलाई बोल्ने ठाउँ छोड्ने व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गर्दा गहिरो रिस उठ्न सक्छ।
यसको मतलब एस को क्षमतामिलनसार हुनु सहानुभूति भन्दा आत्म-ज्ञान संग धेरै धेरै गर्न को लागी छ। अरूसँगको सम्बन्ध विशेष गरी व्यक्तिको आफ्नै भावनाहरू प्रतिबिम्बित गर्न र तिनीहरूको जीवन कथा बुझ्ने क्षमतामा निर्भर गर्दछ।
कसरी अधिक मिलनसार र तपाईं जस्तै मानिसहरू चरणबद्ध हुन
आत्म-ज्ञान प्राप्त गर्न र अधिक मिलनसार हुनु पहिलो चरण हो आफ्नो व्यक्तित्व गहिराईमा जान्नुहोस्, साथै तपाईंको क्षमता, सीमितता र जीवन इतिहास। यो किनभने मानिसहरू ऐना हुन् जसले हामी को हौं भनेर ठीकसँग प्रतिबिम्बित गर्दछ। हामी प्राय: कसैलाई रिस उठाउँछौं वा मन नपराउँछौं किनभने त्यो व्यक्ति हामी जस्तै छ, वा हामी बन्न चाहन्छौं।
आफैलाई माया गर्न सिक्नुहोस्, आफ्नो सबै शक्ति र कमजोरी संग। यदि तपाई आफूलाई जस्तो हुनुहुन्छ त्यसरी स्वीकार गर्नुहुन्न भने, तपाईलाई मानिसहरूलाई जस्तै स्वीकार गर्न धेरै गाह्रो हुनेछ, सधैं यो सोच्नुहोस् कि समस्या अरूमा छ।
आफैमा बिश्वास राख्नुहोस्
TODO संसार राम्रो उदाहरण र शिक्षाको साथ, बताउनको लागि राम्रो कथा छ। जब तपाईं आफैंमा भरोसा गर्नुहुन्छ, तपाईंले मानिसहरूसँग तुलना र प्रतिस्पर्धा गर्ने आवश्यकता गुमाउनुहुन्छ।
भिन्नताहरूको सम्मान गर्नुहोस्
ध्यान राख्नुहोस् कि प्रत्येक व्यक्ति फरक छ र बल र कमजोरीहरू छन्। यस ज्ञानबाट, बाँच्न र व्यक्तिहरू बीचको भिन्नतालाई सम्मान गर्न सिक्नुहोस्सम्बन्धमा अपेक्षा र निराशा सिर्जना गर्दैन।
गल्ती गर्न नडराऊ
धेरै मानिसहरू बकवास कुरा गर्ने र सार्वजनिक रूपमा गल्ती गर्ने जोखिमको सट्टा आफूलाई अलग गर्न रुचाउँछन्। मानिसहरूले गल्ती गर्छन्, र स्पष्ट रूपमा तपाईले धेरै पटक गल्ती गर्नुहुनेछ, तर केहि पनि छैनगल्तीको कारणले तपाईंलाई स्वीकार गर्न वा माया गर्न छोड्छ। अरू सबैजस्तै तपाईं पनि अपूर्ण हुनुहुन्छ भनी बुझ्नुहोस्।
फरक बन्ने प्रयास नगर्नुहोस्, प्रत्येक व्यक्तिको आ-आफ्नै पृष्ठभूमि र कथा हुन्छ, र मानिसहरूले तपाईलाई जस्तै मन पराउनेछन्। हामी सबै फरक र अद्वितीय छौं र यो आवश्यक छैन कि हामी सबै मानिसहरू मनपर्छ। आफै हुनुहोस् र तपाईलाई मन पराउने व्यक्तिहरूसँग आफूलाई घेर्नुहोस्।
आफ्नो जवाफ खोज्नुहोस्
तपाईं एक व्यक्तिसँग किन सहज हुनुहुन्न, तिनीहरूले तपाईंमा कस्तो भावना उत्पन्न गर्छन्, तपाईंलाई के स्वीकार वा क्षमा गर्न आवश्यक छ भन्ने बारे सोच्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण छ, न केवल एक सकारात्मक सम्बन्ध निर्माण गर्न, तर आफ्नो आत्म-चेतना बढाउनुहोस् र आफ्नो आन्तरिक विवाद समाधान गर्नुहोस्।
यी सबै जान्नका लागि सुझावहरू छन् कसरी अधिक मिलनसार र मान्छे मनपराउने। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले तिनीहरूलाई अभ्यासमा राख्नुहुन्छ र तपाईंको लक्ष्यमा मद्दत गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं आफ्नो ज्ञान वृद्धि गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, ब्राउज गरिरहनुहोस् खोजी गर्नुहोस् र हाम्रा बाँकी लेखहरू नछुटाउनुहोस्।